Windows मा Hiberfil.sys फाइल को कसरि हटायें
विन्डोज मार्गदर्शकहरू र ट्यूटोरियलहरू
हरिअफिल .सिई राम्रोका लागि कसरी हटाउनुहोस्
अनावश्यक फाइल हटाउन ठाउँ बचत गर्न सक्दछ
जब तपाईंको कम्प्यूटर हेबर्नरेट मोडमा जान्छ, विन्डोजले हार्ड ड्राइवमा तपाईंको RAM डेटा भण्डारण गर्छ। यसले यसलाई प्रणाली राज्यलाई पावर प्रयोगको बिना बचत गर्न अनुमति दिन्छ र तुरुन्तै तपाई कहाँ पुग्नुभयो। यसले ड्राइभ स्पेसको ठूलो सौदा लिन्छ। जब तपाइँ आफ्नो कम्प्युटरबाट hiberfil.sys मेट्नुहुन्छ, तपाइँ भर्खरै असिब्रेसन अक्षम पार्नुहुनेछ र यो स्पेस उपलब्ध गराउनुहोस्।
यदि तपाईं वास्तवमा Hibernate विकल्पको आवश्यकता छैन भने, तपाईं कमाण्ड प्रोम्प्टमा आदेश प्रविष्ट गरेर यसलाई मेटाउन सक्नुहुनेछ। यस आदेशको लागि, तपाईंले प्रशासकको रूपमा आदेश प्रोम्प्ट खोल्नु पर्छ, जसलाई पनि एक उच्च कमाइ प्रम्प्ट भनिन्छ। तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने तरिकाले तपाइँले प्रयोग गरिरहनु भएको विन्डोको कस्तो संस्करणमा निर्भर गर्दछ।
विन्डोज 10 मा एक उच्च कमांड प्रोम्प्ट खोल्न एक तरिका स्टार्ट मेनुबाट हो।
सुरुमा क्लिक गर्नुहोस् ।
आदेश टाइप गर्नुहोस्। तपाईले कमांड प्रोम्प्ट प्राथमिक परिणामको रूपमा सूचीबद्ध देख्नुहुनेछ।
आदेश प्रोम्ट दाँया क्लिक गर्नुहोस् र प्रशासकको रूपमा चलाउनुहोस् ।
हाँ क्लिक गर्नुहोस् यदि प्रयोगकर्ता खाता नियन्त्रण विन्डो जारी राख्न अनुमति अनुरोध देखा पर्दछ। आदेश प्रोम्प्ट सञ्झ्याल खुल्नेछ।
टाइप गर्नुहोस् powercfg.exe / hibernate कमांड प्रोम्प्प विन्डोमा र इन्टर थिच्नुहोस् ।
आदेश प्रोम्प्ट सञ्झ्याल बन्द गर्नुहोस्।
उच्च कमाइ प्रम्प्ट खोल्न पावर प्रयोगकर्ता कार्य मेनु प्रयोग गर्नुहोस्।
पावर प्रयोगकर्ता कार्य मेनु खोल्नका लागि विन्डोज कुञ्जी थिच्नुहोस् र X कुञ्जी ट्याप गर्नुहोस्।
मेनुबाट आदेश प्रोम्ट (व्यवस्थापक) चयन गर्नुहोस्।
Windows7hiberfill.sys लाई मेटाउन, तपाइँ प्रशासकको रूपमा कमाण्ड प्रोम्ट खोल्नका लागि कुञ्जीपाटी सर्टकट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सीडीडी खोज बक्समा टाइप गर्नुहोस् (तर इन्टर थिच्नुहोस्)। तपाईले कमांड प्रोम्प्टलाई खोजी मेनुको प्राथमिक परिणामको रूपमा सूचीबद्ध देख्नुहुनेछ।
प्रशासक विशेषाधिकारहरूको साथ कमांड प्रोप्ट खोल्नको लागि Ctrl + Shift + Enter थिच्नुहोस् ।
हो भने क्लिक गर्नुहोस् यदि प्रयोगकर्ता खाता नियन्त्रण प्रम्प्ट देखिन्छ।
Windows Vista hiberfill.sys लाई मेटाउन को लागी, तपाइँ स्टार्ट मेनुबाट कमांड प्रोट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यसलाई विन्डोज विस्टामा प्रशासकको रूपमा चलाउन रोज्न सक्नुहुन्छ।
सबै कार्यक्रमहरू चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि सहायक उपकरणहरू छान्नुहोस्।
विकल्प सूचीमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रशासकको रूपमा चलाउनुहोस् ।
Windows XP मा hiberfill.sys मेटाउन को लागी, तपाईंलाई विन्डोज को अन्य संस्करणहरु को तुलना मा थोडा भिन्न दृष्टिकोण लिनु पर्छ।
सुरुमा क्लिक गर्नुहोस् र नियन्त्रण कक्ष चयन गर्नुहोस् ।
पावर विकल्प गुण संवाद बाकस खोल्न पावर विकल्पहरू छनौट गर्नुहोस्।
हिब्रेर ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्।
चेक बाकस खाली गर्न र हेबर्नेशन मोड अक्षम गर्न हाइबर्नेशन सक्रिय गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
परिवर्तन लागू गर्न ठीक क्लिक गर्नुहोस्। पावर विकल्प गुण बक्स बन्द गर्नुहोस्।
हेबर्नरेट पुनः सक्षम पार्नुहोस्
यदि तपाइँ आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सजिलै पुन: हेभर्नरेट सक्षम गर्न सक्नुहुनेछ। एकैपटक एक पटक प्रोम्प्ट खोल्नुहोस्। Powercfg.exe / hibernate टाइप गर्नुहोस्, Enter थिच्नुहोस् र कमांड प्रोम्प्प विन्डो बन्द गर्नुहोस्। विन्डोज एक्सपीमा, केवल पावर विकल्प गुण संवाद बाकस खोल्नुहोस् र हाइबर्नेशन सक्षम गर्नुहोस्।
माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी कट, प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस्
एक पीसीलाई ताररहित गृह नेटवर्कमा जडान गर्दै
विन्डोज प्रयोग गरी वायरलेस नेटवर्कमा जडान गर्नुहोस्
कसरी इन्टरनेट एक्स्प्लोरर 10 मा इन्टरनेट ब्राउजिङ मोड सक्रिय गर्नुहोस्
Windows7समस्या चरण रेकर्डर प्रयोग गर्दै
जगेडा स्थिति स्थितिहरू के हो?
कसरी Internet Explorer 8 मा पाठ आकार परिमार्जन गर्नुहोस्
Internet Explorer 11 मा ActiveX फिल्टर कसरी प्रयोग गर्ने
विन्डोज 10 मा बहु डेस्कटप प्रयोग गर्नुहोस्
खेती चन्द्र: पीएस 1 को लागि प्रकृति धोखा देती छ
Google TV को साथ विजिओ सह-स्ट्रीमिंग प्लेयर - समीक्षा
Outlook.com खोज अपरेटरहरूको कसरी प्रयोग गर्ने
किन एप्पल हेर्ने सबैभन्दा सटीक टाइमपिस त्यहाँ छ
Linux मा iTunes कसरी प्रयोग गर्ने
ITunes को प्रयोग गरेर अपडेट को मैन्युअल रूप देखि जांचें
रङ परिवार र प्यालेटहरू
इथरनेट उपकरणहरू स्वचालित रूपमा
यहाँ तपाईं कसरी Tumblr को GIF खोज इन्जिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
कसरी स्तम्भ ब्रेक घुसाउनुहोस्
XSLT फाइल के हो?
केटाकेटी भनेको केडीई सामान्य फारम (बीसीएनएफ) के हो?
Google Play को डिजिटल संगीत सेवाको रूपमा प्रयोग गर्दै FAQ
एनिमेशन थप गर्नुहोस् OpenOffice Impress Slides मा
के स्काइप एक वीओआईपी सेवा वा वीओआईपी अनुप्रयोग हो?
तपाईंको एप्पल टिभीमा WWDC हेर्नुहोस्
जुम उपकरणमा Adobe InDesign
के "भर्चुअल गाँउहरु" लाँड्री गर्नु पर्छ?
एक मित्र को लागि जन्मदिन को मेम को कसरि खोज्नुहोस
कोड फिक्स3कसरी गर्ने?